Startup Israel 2017 Competition Judging Criteria
Created on Tuesday, 25 July 2017 03:03
Strartup Israel 2017 ပြိုင်ပွဲ Closing Submission ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း
Created on Tuesday, 18 July 2017 08:04
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးသံရုံးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) တို့ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သော Strartup Israel 2017 Competition Closing Submission ရက်အား 20.7.2017 အစား 26.7.2017 သို့တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
ASEAN Makerthon 2017 ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Created on Tuesday, 11 July 2017 10:37
ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပသည့် ASEAN Makerthon 2017 ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၈)ရက်မှ (၁၀) ရက်အထိ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤပြိုင်ပွဲကို အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်းရှိ Maker များမှ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီး Maker များပါဝင်သည့် ခိုင်မာသည့် ကွန်ယက်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် TELMIN အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဤပြိုင်ပွဲသည် အာဆီယံ Maker များမှ ၄င်းတို့၏ တတ်ကျွမ်းမှု စိတ်ကူးများနှင့် တည်ထွင်ဖန်တီးမှုများကို ပုံစံငယ် (Prototype) များ ဖန်တီးပြသနိုင်ရန် နေရတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤပြိုင်ပွဲ၏ Theme မှာ Internet of Things (IOT) ဖြစ်ပါသည်။
MAKERTHON REGISTRATION FORM (Download PDF)
MAKERTHON REGISTRATION FORM (Download Word File)
Volunteer for NICTA (TOT)
Created on Wednesday, 14 June 2017 04:36
Created on Monday, 12 June 2017 10:11
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ ကြီးမှူး၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကျင်းပပြုလုပ်သော ITPEC စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၀)ရက်၊ စနေနေ. နေ.လည်(၁)နာရီမှ (၄)နာရီ အထိ MICT Park, Conference Hall တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်.စင်မောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ် နာယက ဦးသိန်းဦး၊ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမီမီသက်သွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းတို.မှ အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလများတွင် ITPEC (AP,FE,IP) စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့သူ ကျောင်းသား /ကျောင်းသူများ၊ မိဘများနှင့် ဧည်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Startup Israel 2017 Competition Entry Form
The information contained within this document is confidential and only to be
used by the assigned Judges for the purposes of assessing this entry.
Startup Israel 2017
Created on Monday, 12 June 2017 08:05
Created on Monday, 05 June 2017 03:17
ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း(၁၁)ကြိ မ်မြောက် သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဋ္ဌာန၊ TDOC Secretariat နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျုတာအသင်းချုပ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ကွန်ပျူတာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းကို (၈.၅.၂၀၁၇) မှ (၂၆.၅.၂၀၁၇) ထိကျင်းပခဲ့ပြီး သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို (၂၆.၅.၂၀၁၇) တွင် ကျေးလက်ရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဋ္ဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
YOUNG TECHNOPRENEUR AWARD Final Selection Results
Created on Tuesday, 30 May 2017 07:32
၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော YOUNG TECHNOPRENEUR AWARD Final Selection Results ကြေငြာခြင်း
ITPEC Examination (IP) Exam Result
Created on Thursday, 18 May 2017 07:50